PressReader - Isolezwe: 2018-04-13 - Uqhubeke kukubi owesiqiwi
Uqhubeke kukubi owesiqiwi
UCISHE wangaqhubeka umcimbi wokwethulwa kwesiqiwi emphakathini waKwaXimba ngesikhathi amalungu omphakathi abenganeme ngaso esusa uthuthuva izolo.
Amalungu omphakathi abedinwe egane unwabu asuse umsindo emcimbini wokwethulwa kwesiqiwi somphakathi waKwaXimba, iMayibuye Game Reserve esiseCamperdown.
Isiqiwi sithulwe yiphini likangqongqoshe wezeMvelo, uNkk Barbara Thomson kubantu bakule ndawo ababuyiselwa umhlaba emuva kokususwa ezindaweni zabo ngesikhathi sobandlululo. UNkk Thomson uthe bafake imali elinganiselwa kuR10 million ekutheni kulungiswe isiqiwi ukuze sithuthukise umnotho wabantu baKwaXimba.
Amalungu omphakathi abenganeme ngesiqiwi aphazamise umcimbi wokwethulwa kwaso, ethi abengazange avumelane nokuthi indawo isetshenziselwe isiqiwi. Abebediniwe bakhale nangokuthi babethenjiswe ukuthi luzoma uhlelo lokuthulwa kwaso emuva kokuthi sebezwakalise ukungenami kuNkk Thomson.
Elinye ilungu lomphakathi abelinganeme ngokwethulwa kwesiqiwi, uMnuz Leonard Majola,
lithe babezimisele ngokuwusebenzisa ngenye indlela umhlaba.
“Sasishilo ukuthi asifuni ukuthi kube nesiqiwi kunalokhu sasicele ukunikwa ingxenye yomhlaba ukuze sikwazi ukulima kuyona. Sakukhuluma ngalokhu nongqongqoshe wasithembisa ukuthi luzomiswa uhlelo lokwethulwa kwesiqiwi. Siyamangala uma sekuqhubeka lo mcimbi,” kusho uMajola.
Kuze kwabizwa amaphoyisa ukuthi azoqapha isimo ngesikhathi lawa malungu omphakathi eqhubeka nokuphazamisa izikhulumi esho ngokungananazi ukuthi awazimisele ngokwamukela uhlelo obeluthulwa.
Umcimbi uqhubeke kunzima, umphakathi obukhala waze wacelwa ukuthi ubekezele uze uphele ukuze uzonikwa ithuba lokuthi uxoxe noNkk Thomson.
UNkk Thomson uthe bazozilalela izikhalo zabanganeme. Uthe ukholwa wukuthi bafisa ukuba yingxenye yesigungu esengamele izinhlelo zokuthuthukiswa kwesiqiwi.
Uthe bazoxoxa nabo bathole kahle ukuthi yini lena abafisa ishintshwe. UNkk Thomson uthe lesi siqiwi sizowuthuthukisa umphakathi waKwaXimba.
“Uma seyilungiswe kahle, le ndawo izofana nezinye iziqiwi njengeHluhluwe Game Reserve nezinye. Sifuna le ndawo ivakashelwe abantu bezobona izilwane nemithi ekhona,” kusho uNkk Thomson.
Isithombe: NQOBILE MBONAMBI/ AFRICAN NEWS AGENCY (ANA)
AMALUNGU omphakathi waKwaXimba abenganeme ngokwethulwa kwesiqiwi somphakathi aphazamise umcimbi
IPHINI likagqongqoshe wezeMvelo uNkk Barbara Thomson lizama ukwehlisa umoya emalungwini omphakathi abenganeme ngokwethulwa kwesiqiwi iMayibuye Game Reserve